Drupal - MYSTERY ZILLION
December 2009 edited November 2010 in CMS
Drupal မှာ လိုဂို ဘယ်လိုထည့်ရလဲ....လိုဂိုကိုထည့်တယ် အဲ ပြီးတော့ Blocks နဲ့ နေရာချတယ်
ဒါပေမယ့် နဂို ရှိပြီးသား ကောင်ကပျောက်မသွားပါဘူး အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ..
I know it......:)
ကိုကြည့်ရှောင်ရေ အဲဒီဟာအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျ။ ebook လေးရှိရင်ပေးပါလား။
အဲ့ကယူပါ ကိုရောင်...နောက်ရှာတွေ့ ရင်ထပ်ပြောပြပါ့မယ်......
Drupal ကို localhost မှာ အင်စတောလုပ်နည်းပြောပြပါမယ်။အရင်ဆုံး Drupal ကို
Download လုပ်ပါမယ် www.drupal.org
ဒေါင်းပြီးပါက မိမိမှာရှိသော wamp or xampp or other local server တစ်ခုခုထဲ
သို့ ထို Drupal Zip ကိုဖြည်ပြီးထည့်လိုက်ပါ။ထို့နောက် server start လုပ်လိုက်ပါ
ထိုပုံသည် Drupal Install Home page ဖြစ်ပါသည်။ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Install Drupal in English ကို နှိပ်ပါ။
နဂိုရှိပြီးသား default.settings ကို settings ဆိုပြီး copy ကူး rename လုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးနောက် ခုန အယ်ယာတက်နေတဲ့ page ကို reload လုပ်လိုက်ပါ။
ခုဆို Database တွေဖြည့်ဖို့ နေရာ ရောက်လာပြီ။ခဏထားလိုက်ပါဦး phpmyadmin ခေါ်လိုက်ပါ။ပြီးနောက် drupal ဆိုတဲ့ database လေးဆောက်လိုက်ပါ။
မိမိစိတ်ကြိုက်ဖြည့်ပြီး Save and continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အပေါ်က warning mail() ဆိုသောအယ်ယာသည် email error ဇြစ်ပါသည်။local တွင်
စမ်းသောကြောင့်ဇြစ်ပါသည်။အွန်လိုင်းမှာစမ်းလျှင်တော့ အပေါ်မှာ ကိုယ်ဖြည့်ထားတဲ့
Email သို့ စာပြန်ပို့မှာဖြစ်ပါသည်။ဟုတ်ပြီ ခုတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ your new site
ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ထိုသို့ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် Drupal home page ကိုရောက်သွားမည်
ဖြစ်ပါသည်။Administrator ဆိုတဲ့ menu ကိုနှိပ်ပါက Drupal ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်လို့ရပါမည်။
နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ ပြင်ဆင်နည်း(Themes,Menu,Content) အနည်းငယ်ကို
Drupal6အတွက် Template တွေဇြစ်ပါတယ်..စမ်းချင်သူများ အတွက်ပါ...
ဒါကတော့ Module တွေဇြစ်ပါတယ်..
Drupal ရဲ့ Story,page,content,forum စတဲ့နေရာတွေမှာ ပုံထည့်လို့ရပါတယ်...
kyishaung wrote: »
ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ပါ...module တွေက version မတူရင် ထည့်လို့မရပါဘူး...ဒီတော့
ကိုယ့် Drupal version နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ module တွေကိုရှာပြီး သုံးပါ
i don't know how to give youaclear answer...If u want to know about it...ask my friend and tell u...pls give me your gmail address...
myominmyataung wrote: »
ဘာကိုပြောတာလဲခင်ဗျ..အစက မေးထားတဲ့ လိုဂိုထည့်တာ တို့ Blocks နဲ့နေရာချတာတို့ကိုပြောတာပါလားခင်ဗျ..
Themes တော်တော်များဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်..Drupal,Joomla,WP စသဖြင့်ပေါ့
Printer, email, and PDF Versions
ImageAPI, ImageCache, Imagefield
Voting API + Fivestar
ဒါတွေကတော့ Drupal မှာရှိသင့်တဲ့ မော်ကျူးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့ လိုချင်ရင်တော့ drupalmodules.com နဲ့ drupal.org site ကနေဒေါင်းလို့ရပါတယ်။
I made this presentation on CMS CampMandalay 2011.
durpal ကို ဘယ် localhost ဗားရှင်းမှာ အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ သိချင်လို့ပါ
Do you have XAMPP ?
ကျနော်က အခုမှ drupal ကို စလေ့လာတာပါ ကျနော်သိချင်တာက drupal မျာ tag တစ်ခု ထည့်ချင်တယ်ဆို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ ဆိုတာ သိျင်ပါတယ် drupal မှာ အဲ့ဒါကို module လို့ ခေါ်တာများလား အဲ့ဒါဆို ရင် တောင့် ဒေါင်းပြီးမှ ထည့်ရမယ့် သဘောပေါ့နော် ကျနော်လုပ်ချင်တာက အခု ကောမန့် ဘောက်မှာ တွေ့တဲ့အတိုင်း (မှတ်ချက်ရေးသားရန်) ဆိုတဲ့ tag တစ်ခု (စာကြမ်းနမူနာ) ဆိုတဲ့ tag ဆစ်ခု (စာင်္ကြး သိမ်းဆည်းရန်) ဆိုတဲံ tag တစ်ခု ရှိတယ်လေ အဲ့လိုမျိုး tag aတွကို drupal rှာ ဖန်တီးချင်တာပါ ကျေးဇူးပြီးပြီး လမ်းညွတ်ပေးပါခင်ဗျာ
Tag ဆိုတာ Taxonomy Terms Module က အလုပ်လုပ်တာပါ ။ ကိုဗိုလ်ဗိုလ်ထွန်း ထည့်ချင်တဲ့ Tag ဆိုတာ ဘယ် Content အမျိုးအစားကို ထည့်မလဲ ဆိုတာကို မူတည်ပါတယ်။ Drupal မှာ Default က Article Content Type မှာ Tag ပါပါတယ် ။ အဲ့ဒါကို Taxonomy Module ကနေ Control လုပ်လို့ရပါတယ်။ Taxonomy ကို ရှာချင်ရင Modules အောက်မှာ အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါတယ်။